गृहमन्त्री बादलका भाइ फिरौतीमा पक्राउ , सार्वजनिक भयो प्रहरीले अति गोप्य राखेको घटना !::
गृहमन्त्री बादलका भाइ फिरौतीमा पक्राउ , सार्वजनिक भयो प्रहरीले अति गोप्य राखेको घटना !
दुई वर्षअघि राजधानीमा भएको एउटा ह- त्याका.ण्डका मुख्य अभियुक्तसँग मिलेर फिरौती संकलनमा सक्रिय रहेको आरोपमा नरेश थापा पक्राउ परेका छन्।
उनी ग्रहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)का साइँला भाइ हुन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको २०७४ असोज २३ गते घरबाट कार्यालय जाँदै गर्दा शान्तिनगरमा गाडीभित्रै गोली प्रहार गरी ह-त्या गरिएको थियो ।
उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेतलाई तीन महिनापछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भारतबाट पक्रेर ल्याएको थियो । यिनै समीरसँग नरेशको सम्पर्क जोडिएको देखिएको प्रहरीको दाबी छ ।